Magaalada Istockholm oo looga codeeyey khidmadda gawaarida ku gooshta farasmagaaleedka Stockholm - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Magaalada Istockholm oo looga codeeyey khidmadda gawaarida ku gooshta farasmagaaleedka Stockholm
Publicerat måndag 18 september 2006 kl 17.34
Saldhig diiwaangeliya cashuurta gawaarida gooshta farasmagaaleedka Istockholm
Bulshada ku dhaqan degmada Istockholm ayaa u codeeysey haa in halkiisii laga sii wado khidmadda ama cashuurta laga qaado gawaarida gasha farasmagaaleedka degmada Istockholm.
Kolkii la xisaabiyey tirada codeyntaa ayey muuqataa in dadka badankii ey ku codeeyeen haa, inkasta oo dadyoowgii ka codeeyey ee degmooyinka ku weegaarsan Istockholm u egtahey iney u codeeyeen maya.
457 goobood oo ka mid ah goobaha laga codeynayey oo tiradoodu gaarsiisneyd 461, ayey bulshada codkooda ku dhiibtey ”Haa” ey tiradoodu gaarsiisan tahey 51,7%, halka inta ka soo horjeesatey ey dhammeyd 45,6%, sida ku cad tirakoob aannu ka soo xiganey heyadda codeynta.
Kristina Axén Olin, oo xisbigeedu ku guuleystey awoodda Istockholm, ayaa sheegetey iney hirgelin doonto go’aanka codeyntaasi ka soo baxda.
- Waxaan horey u ballan qaadey inaan qadariyo gop’aanka ey gaaraan shacbiga ku dhaqan degmada Istockholm. Haddii ey shacbigu u codeeyaan – Haa, waxaan ka suurtagelin doonaa dawladda cusub ee midigta iney taasi suurtageliyaan, islamarkaana dhaqaalaha cashuurtaa ka soo gala oo dhanna ey dib u gasho nawaaxiga Istockholm.
Dhinac walba ee codeynta shacbiga degmada Istockholm u dhacdo waxaa shuruud ah baarlamanku go’aan midda ka gaaro, mana aha arrin, halkaasina oo ey horey xisbiyada Midigtu u sheegeen iney qiimeyn doonaan codadka degmooyinka ku weegaarsan magaalada Istockholm qudhoodu, halkaasina oo ey codkooda ka dhiibteen 14 degmo ka baxsan Istockholm.
12 ka mid ah degmooyinkaa ayaa natiijadoodii illaa iyo hadda la xaqiijiyey kuwaasina oo u codeeyey – Maya, in aan cashuurtaa la sharciyeyn.
- Waxaan rajeyneyaa in xisbiyada la wareegi doona awoodda dalka bartamaha bisha Oktoober ey tixgeliyaan go’aanka ey gaareen bulshada ku dhaqan Istockholm, aaneyna wax ka badalin middaa. Waxey middaasi keeni kartaa caqabado aan la qiyaasi karin, iyada oo arrinkanina yahey markii ugu horreysey ee degmada Istockholm u codeyso arrin u gaar ah, sida ey sheegtey Annika Billström, ahna duqa magaalada Istockholm ee iminka doorashada lagaga guuleystey.
Waxey u muuqataa arrin aan hirgeli doonin.
In kasta oo ey codeyntaa ku guuleysteen dadyoowga codkooda ku dhiibtey ”Haa” ee degmada Istockholm, kana badnaayeen tira ahaan kuwa ka soo horjeedey, ayaa haddana laga yaabaa in aaney go’aankaa diidmada la qaadan, sida uu qabo Mats Odell madaxa xubnaha baarlamanka ee xisbiga Kristendemokratka ee dhowaantan ku guuleystey doorashadii awoodda dalka.
Middaa ayuu sabab uga dhigey iney ”Maya” u codeeyeen 14 ka mid ah degmooyinka ku yaala duleedka Istockholm una codeeyey ”Maya”.
- Qariidaddaa ayaa noo jeexan, haseyeeshee waa in marka hore laga doodaa lana macneeyaa arrinkaa, inkasta oo sida ey ila tahey aaney jirin doonin wax cashuur ah ee laga qaado gawaarida gooshta farasmagaaleedka degmada Istockholm, sida uu sheegey Mats Odell.